कहिले ठडिएला त लिफ्ट, पार्किङ र म्युजियमसहितको ११ तले धरहरा! « Naya Bato
कहिले ठडिएला त लिफ्ट, पार्किङ र म्युजियमसहितको ११ तले धरहरा!
काठमाडौं, कहिले ठडिएला धरहरा ? राजधानीको सुन्धारामा रहेको ऐतिकासिक धरहरा अघिल्लो बर्षको भूकम्पले धुलीसात बनाएयता धेरैको मनमा यो कौतुहलता छ । अघिल्लो सरकारले अघि सारेको म बनाउँछु धरहरा अभियानमा हजारौं नेपालीले करोडौं सहयोग गरे ।
धरहरा बनाउन विदेशी सहयोग नलिने, नेपालीकै सहयोगबाट सम्पन्न गर्ने नारासहित अघि सारिएको उक्त अभियानमा साथ दिँदा पनि किन ढिलो हुँदै छ धरहरा पुननिर्माण रु नेपालीको यो जिज्ञासा अब छिट्टै मेटिनेछ । किनकि सरकारले अर्को महिनाबाट धरहरा पुननिर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धरहरा पुननिर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय छलफलले गरेको छ । अब बन्ने धरहरा ११ तला र उचाइ पहिलेजत्तिकै २ सय ४५ फिट राखिनेछ । अपांगता भएका, बालबालिका बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई ध्यानमा राखी दुइवटा लिफ्ट राखिनेछ । थपिएका दुइ तलामा भूमिगत पार्किङ र म्युजियम राखिनेछ । -नागरिक दैनिकबाट